Payback - Love Love - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
Payback Average 3.8 / 5 avy amin'ny 5
N / A, manana fomba fijery 8.2K
Ireo mpampiasa 4 dia nanamarika ity
Yoohan, izay niditra tao amin'ny orinasa mpampindrana vola tamin'ny taona izay nandraisan'ny olona rehetra manodidina azy fitsapana lehibe ho an'ny asany amin'ny ho avy, dia miaina fiainana toy ny zazakely mandehandeha mandrahona sy mampiasa herisetra handrava-bola ao anatin'ny asany. Ary indray andro, very ny fianakaviany tamin'ny tanan'ny olona iray izay nitana lolompo taminy. Mahatsiaro tena ho meloka fa maty ny fianakaviany noho ny aminy, niaina fiainana tsy milamina tsy misy afa-tsy ny fikelezana aina amin'ny faniriana hanonitra ny fahotany izy. Aorian'izay, sendra azy ny fahalalana ny fahamarinana fa ilay mpiray trano aminy taloha, Song Myeong-sin, dia nandray anjara tamin'ny fahafatesan'ny zandriny lahy ary nanapa-kevitra ny hamaly faty azy.
Ny Yoohan izay nanapa-kevitra toy izany dia nifandray tamina lehilahy nilaza fa hanampy azy izy….
Azonao atao ny mahita eto, ny tontolon'ny yaoi smut, yaoi gifs